Bakteeriyo laga helay hilibka doofaarka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bakteeriyo laga helay hilibka doofaarkaFoto: Kerstin Joensson/TT
Bakteeriyo laga helay hilibka doofaarka
Publicerat torsdag 13 november 2014 kl 10.14
Hilibka doofaarka ee laga soo dhoofiyo waddamada Denmark iyo Jarmalka ayaa laga helay bakteeriyada adkaysiga badan ee loo yaqaano MRSA. Jarriiradda DN oo kaashanaysa maxadka xannaanada xoolaha ayaa baadhitaan ay ku sameeyeen 15 dukaan oo ku yaalla magaalada Stockholm
waxa ay ku ogaadeen in hilibka doofaarka ee laga keeno waddanka Denmark ay labaatankii xidhmo ama bacoodba afar ka mid ah ay ku jirto bakteeriyada loo yaqaano MRSA. Halka hilibka doofaarka ee laga soo dhoofiyo dalka Jarmalkana labaatankii xidhmoba mid ka mid ahi wadato makteeriyadaasi.
Waddamada Denmark iyo Jarmalka waa iska caadi in bakteeriyadani ku jirto hilibka doofaarka. Denmark, sannadkii 2009 waxa ay bakteeriyadani ku jirtay 13% doofaarada waddankaasi ku dhaqan, halka sannadkii 2012 ay bakteeriyadaasi gaadhay 77%, taasi oo ka dhigan in afartii doofaarba saddex ka mid ahi wataan bakteeriyadan. Daraasaddii u danbaysayna waxa ay muujinaysaa dukaamada Denmark ku yaalla in shantii xidhmo ee hilib doofaarka ah mid ka mid ahi wadato bakteeriyadan loo yaqaano MRSA. Taasina waxa ay dhalisay dood badan iyo in la baadho hilibka doofaarka.
Sannadkii hore waxa Iswiidhan loo soo dhoofiyay 142 000 tan oo hilibka doofaarka ah, afar meeloodoow laba saddex meelood oo ka tirsan hilibkaasina waxa uu ka yimid waddamada Denmark iyo Jarmalka. Bakteeriyadan MRSA ayaa ah mid laga helo doofaarka haraggiisa sare iyo waliba qaybaha jidhkiisa.